ပရိတ်သတ်တွေ ပျော်ရွှင်အေးချမ်းဖို့ EXO အဖွဲ့ဝင်တွေရေးထားတဲ့ Christmas ဆုတောင်းစာများ
Merry Christmas ပါ Asia Cele Bar ပရိတ်သတ်ကြီးတို့ရေ… ပျော်ရွှင်အေးချမ်းတဲ့ အားလပ်ရက်လေး ပိုင်ဆိုင်မယ်လို့ မျှော်လင့်ပါတယ်။ Kpop fan တွေဆို ချစ်ရတဲ့ Idol တွေရဲ့ update လေးတွေရလို့ ပိုပျော်နေမယ်ထင်ပါတယ်။ ဒီတခါမှာတော့ EXO အဖွဲ့ဝင်တွေရဲ့ Christmas အထူး update လေးတွေကို ဖော်ပြပေးသွားပါ့မယ်။
အရင်ဆုံး မနေ့က Christmas Eve ( အကြိုနေ့) မှာ စစ်မှုထမ်းနေရတဲ့ EXO leader “Suho” က Instagram မှာ ပုံတင်ပေးခဲ့ပါတယ်။ ခါတိုင်းနှစ်တွေလိုဘဲ EXO L တွေအတွက် ဆုတောင်းစာနဲ့ တကွ ပုံလေးတွေတင်ပေးခဲ့ပါတယ်။ Caption ကိုတော့…
“I’m groot 🎄 (Merry Christmas ပါ ..EXO-L တွေကို လွမ်းတယ်🎄)” Christmas နေ့လေးကို အတူတကွ ဖြတ်သန်းပြီး နောက်နှစ်သစ်မှာလည်း အတူရှိနေမယ်..”
နောက်တစ်ယောက်ကတော့ Kai ပါ။
မနေ့က 🐻: merry christmas~~~~~ eve😍😍 🐻: ㅎㅎㅎ Christmas နေ့မှာ ဘာလုပ်ကြမှာလဲ 🐻: ကျွန်တော်ကတော့ ကောင်းကောင်းအနားယူမယ်”
လို့ Bubble chat မှာ ပို့ပေးခဲ့ပါတယ်။ ဒီနေ့ Christmas နေ့ မနက်ခင်းမှာတော့ “Merry Christmas for real 😍” လို့ နှုတ်ခွန်းဆက်ခဲ့ပါတယ်။
SNS တွေမှာ active ဖြစ်ခဲတဲ့ D.O. ဆိုလည်း ဒီနေ့မှာပေါ်လာခဲ့ပြီး bubble chat မှာ စာတွေ ခုလို ဆက်တိုက်ပို့ပေးခဲ့ပါတယ်။
🐧: Merry Christmas ..အားလုံးဘဲ ကောင်းကောင်း အနားယူကြပါ။ ကျွန်တော်ကတော့ မကြည့်ရသေးတဲ့ ရုပ်ရှင်တွေကြည့်မယ်.. အရသာရှိတာတွေစားပြီး အပန်းဖြေမယ်” 🐧: ကျွန်တော်ကြည့်ပြီးသမျှ marvel ရုပ်ရှင်တွေထဲမှာ “No Way Home” က တကယ့်ကိုအကောင်းဆုံးဘဲ။ 🐧: အားလုံးကျန်းမာနေကြတယ် သိရလို့ တကယ်ဝမ်းသာပါတယ်။ 🐧: “ချစ်ရတဲ့လူတွေနဲ့ ပျော်ရွှင်ဖွယ်အချိန်လေးကို ကုန်ဆုံးကြပါ… ဒီနှစ်ရဲ့ နောက်ဆုံးချိန်ကို ကောင်းကောင်းမွန်မွန်အဆုံးသတ်နိုင်မယ်လို့ မျှော်လင့်ပါတယ်”
Xiumin ကတော့ ဝိုင်တခွက်သောက်နေတဲ့ ပုံ နဲ့
“Merry Christmas~🎄အားလုံးဘဲ Christmas နေ့လေးကို ပျော်ပျော်ရွှင်ရွှင် ဖြတ်သန်းနိုင်ကြပါစေခင်ဗျာ” လို့ bubble chat မှာတင်ပေးခဲ့ပါတယ်။ lysn ကနေ တင်ပေးတဲ့ Christmas ကဒ်မှာတော့ “EXO-L Merry Christmas! နွေးနွေးထွေးထွေးနေကြပါ”
အငယ်ဆုံးလေး Sehun ရဲ့ Christmas card မှာကျတော့ ခုလိုရေးထားပါတယ်။
“Merry Christmas!! ကောင်းတဲ့ကလေးတွေဆို Santa Claus က လက်ဆောင်တွေအများကြီး ပေးတယ်ဆိုတာ သိတယ်မလား … အကုန်လုံးဘဲ လိမ်လိမ်မာမာ နေကြရအောင်”
Chanyeol ကတော့ ပြဇာတ်ကနေရတာ မပြီးသေးတဲ့အတွက် မနေ့က Christmas Eve နေ့မှာလည်း ဖျော်ဖြေခဲ့ရပြီး ဒီနေ့လည်း ထပ်ဖျော်ဖြေရပါတယ်။ ဒီနေ့တော့ Chanyeol က ပိုတက်ကြွနေတယ်လို့ကြားသိရပြီး EXO L တွေအတွက် ဆုတောင်းစာကို card တစ်ခုပေါ်မှာ ခုလိုချရေးပေးခဲ့ပါတယ်တဲ့။
“ကျွန်တော်နဲ့ 2021 ခုနှစ်မှာ တူတူရှိခဲ့ကြလို့ ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ နောင်အနာဂတ်မှာလည်း ကျွန်တော်အကောင်းဆုံးကြိုးစားသွားပါ့မယ်… အကုန်လုံးကို ချစ်တယ် – Chanyeol”
ဆိုပြီး ဖြစ်ပါတယ် ။ ခုလို EXO member တွေရဲ့ update တွေရတဲ့အတွက် EXO-L လေးတွေ ပျော်ရွှင်နေကြမယ်ထင်ပါတယ်နော်။ “Merry Christmas to you all” ပါ.. အားလုံးဘဲ စိတ်ချမ်းသာကြပါစေ…
Photo Credit: lysn, Bubble, Instagram
Previous post ခရစ်စမတ်မှာ BLINK ​တွေအတွက် ​မ​မျှော်လင့်ထားတဲ့ အထူးလက်​ဆောင်တစ်ခုကို ​ပေးခဲ့တဲ့ Lisa
Next post ခရစ်စမတ်နေ့မှာ BTS အဖွဲ့ဝင် ၂ ဦး Covid-19 ရောဂါကူးစက်ခံထားရကြောင်း HYBE အသိပေး